समाचार - पानीको गिलास कास्टिंग, मचान
सानो कास्टिंग, ठूलो भिन्नता! हामी किन पानीको गिलास प्रक्रिया प्रयोग गर्न जोड दिन्छौं? (१)
कास्टिंग को उच्च लागत को एक हिस्सा हो रिingलक स्क्रफोल्डि। सहायक उपकरण, गुणले प्रत्यक्षको स्थिरता र सुरक्षालाई असर गर्दछ मचान नोड र सेवा जीवन मचान, त्यसैले कास्टि ofको छनौटमा, हामीले हाम्रो आँखा पोलिश गर्नुपर्दछ। आज हामी कास्टि aboutको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छौं।
रिlockलक स्क्रोफोल्डको मुख्य कास्टि areहरू हुन्: खातर कनेक्टर्स, विकर्ण ब्रेस कनेक्टरहरू। वर्तमानमा रिंगलक स्क्रफोल्डिंग कास्टि ofको दुई मुख्य प्रक्रियाहरू छन्, एउटा बालुवा कास्ट छ, अर्को पानीको गिलास हो, दुई प्रक्रियाहरूमा के भिन्नता छ, हामीले कसरी छनौट गर्नुपर्छ? मलाई तपाईका केही अनुभवहरू बाँड्न दिनुहोस्।
बालुवा कास्ट र पानीको गिलासको प्रक्रिया वर्णन गर्दै
पानी काँच कास्टिंग
पानीको गिलास बाइन्डर र क्वार्ट्ज बालुवाको रूपमा निश्चित अनुपातमा मिलाइन्छ र मोल्डिंग बालुवा बनाइन्छ, जुन मोल्ड बनाइसके पछि कार्बन डाइअक्साइड उडाएर निको हुन्छ, र त्यसपछि मोल्ड उठाइन्छ, बन्द हुन्छ र कास्टि intoमा खसालिन्छ।
बालुवा कास्ट कास्टिंग
क्वार्ट्ज बालुवालाई बालुवा मिश्रण मेशीनमा तताइन्छ, र राल, क्युरिंग एजेन्ट र एन्टि-सिमेन्टेशन एजेन्ट थपिन्छन् ताकि क्वार्ट्ज बालुवाको सतहलाई राल फिल्मको लेयरले ढाकिए। मिक्सिंग एकसमान भएपछि क्वार्ट्ज बालुवा चिसो हुने र क्रसिंग स्ट्यान्डबाइको लागि जारी गरिन्छ, र प्रयोगलाई तताउन र ठीक गर्न आवश्यक छ।
सामान्यतया, बालुवा कास्ट उत्पादन उच्च, कम लागतमा हुन्छ; पानी गिलास को उत्पादन कम छ र लागत अधिक छ। बजार मूल्यका अनुसार, पानीको गिलास कनेक्टर्सको मूल्य बालुवा कास्ट कनेक्टर्सको भन्दा २ गुणा छ!